Switzerland na Spain Euro 2021 Amụma na tingkụ nzọ Atụmatụ - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 30, 2021No Comments
Switzerland na Spain ga-abụ egwuregwu izizi na nkeji iri na ise nke Euro 2020. Asọmpi Switzerland na Spain ga-eme na June 2 na 1800 elekere Central Eastern European Summer Time na Krestovsky Stadium na Saint Petersburg, Russia.
Switzerland Formdị, usoro nwere ike na Usoro
Na-abata na European Championship na 2021. Switzerland tozuru otu ha na ndị tozuru oke ma nyefee naanị goolu isii. Tupu egwuregwu mmeghe ha na Euro 2020 megide Wales, Switzerland meriri egwuregwu ise niile ha gbara na 2021.
Switzerland tozuru nke ọma na nke iri na isii site na ịmịcha nke atọ na otu A. A na-ejikọta Switzerland na nke abụọ nọ na Wales mana ọ dabara na nke atọ n’ihi Wales nwere goolu ka mma.
Na agba nke 16 Switzerland chere France ihu. France bụ ọkacha mmasị doro anya iji merie ọ bụghị naanị egwuregwu a kamakwa Euro 2020 na-eche na ha meriri iko ụwa 2018, rutere n’ikpeazụ nke Euro 2016 ma bụrụ ndị otu abụọ kachasị mma n’ụwa site FIFA.
N’egwuregwu ha na France, Switzerland rụrụ ọrụ ịtụnanya ebe ha chịrị ọkara nke mbụ ma duru 1-0 wee nyezie goolu atọ na ọkara nke abụọ.
Site na akara ngosi dị mma nke 3-1, France yiri ka ọ ga-eru eru maka nkeji iri na ise. Mana Switzerland jidere goolu abụọ na nkeji iteghete gara aga site na goolu si Seferovic na Gavarnovic nke mere nke ọma itinye egwuregwu ahụ.
France dara igbusi Switzerland na oge oge na Switzerland meriri egwuregwu na penariti.
Nke a bụ oge mbụ ha ruru eru maka agba nke anọ na European Championship na oge izizi mere ya na asọmpi nnukwu ọ bụla kemgbe 1954.
A maara Swiz na ha na-arụsi ọrụ ike ma hazie nke ọma ma gosipụta nke a na ụdị egwuregwu ha.
A ma ama na otu egwuregwu bọọlụ Switzerland maka nchekwa siri ike ha na ịhazi ọnọdụ ha. E gosipụtara nke a na ihe ndekọ ha setịpụrụ na mba ụwa.
Were 2006 FIFA World Cup dịka ọmụmaatụ. Switzerland setịpụrụ ihe ndekọ FIFA World Cup site na iwepụ ya na asọmpi a n’agbanyeghị na-enyeghị otu goolu. E kpochapụrụ ha na agba nke iri na isii mgbe egwuregwu ha megide Ukraine banyere na ntaramahụhụ.
Ha ga-aga n’elu n’elu ndekọ a na iko mba ụwa ọzọ n’afọ 2010 ebe ha enyeghi otu goolu rue mgbe ha chere Chili ihu ma debe akara iko mba ụwa n’oge nkeji oge n’etughi ihe ọ bụla.
Dị ka e kwuru na mbụ Switzerland na-egwu egwuregwu a haziri ahazi nke bọọlụ na isi mesiri ike na nkwụsi ike na ịhazi ọnọdụ.
E gosipụtara nke a na usoro ha họọrọ 3-4-3 nke egwuregwu na-adị ka 5-4-1 na 2 ndị na-eme egwuregwu sara mbara na-esonye na etiti azụ na mmadụ abụọ n’ime ndị mwakpo ahụ na-esonye na ndị na-agbachitere ndị na-agbachitere 2 na midfield.
Remo Freuler na Granit Xhaka ebidola na egwuregwu ọbụla dịka ndị a na-etiti.
Agbanyeghị na Swiz bụ ndị amaara inye goolu pere mpe, ha enyela goolu asatọ n’ime egwuregwu 4 ha gara aga na Euro 2020. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke otu ọbụla tozuru oke ruo na nkeji iri na ise na Euro 2021.
Switzerland hụrụ ọgụ na obosara ma gbatịa egwuregwu ahụ. Mee ihe na-ewetara anyị nnọọ ndidi site na mbara. Aka ekpe na etiti etiti azụ na-agagharị ntakịrị ntakịrị iji malite egwuregwu ma gbatịa ubi ahụ ebe ndị na-agbachitere agbachitere abụọ na-eme ka otu kọmpat ma gbochie nrụgide sitere na otu ndị na-emegide ya.
Abụọ nku azụ wee gaa n’ihu ịnọ nso na akara ahụ ka ha na-aga n’ihu ma bụrụ isi maka isonye na ọgụ ahụ. Ha na-eme nke a site n’ịgbagharị n’obe ndị na-egbu egbu site na mbara ma ọ bụ na-egbutu n’ime ka ndị na-aga n’ihu na-ejupụta igbe.
N’ihu 3 dị ka ihu 2 nke na-akwado onye na-agbachitere etiti. Breel Embolo na Haris Seferović amalitela egwuregwu ọ bụla dị ka ndị na-akụ 2 na Xherdan Shaqiri na-akwado ha na-egwuri egwu n’azụ ha.
Ọ bụ ezie na Switzerland nwere ike ịdị ka ọ bụ otu egwuregwu anaghị enwetakarị akara oge na ụdị egwuregwu ya nwere ike ọ gaghị adabara ọtụtụ ndị na-anọpụ iche ma ọ bụrụ na Switzerland ekwenye na ha nwere ike ibute oge ahụ na-ewetara ndị na-eto eto ihe okike na ịwakpo ndị egwu dị ka Denis Zakaria na ndị nwere ahụmahụ karịa Remo Freuler .
Ndị na-anọpụ iche ga-enwe ọ roụ ịgbanye mkpọrọgwụ Switzerland n’ihi na ha nwere ọnụọgụ nke atọ kachasị elu n’ihe mgbaru ọsọ.
Switzerland ndị isi egwuregwu
Site na enyemaka 4, Steven Zuber nyere ndị enyemaka enyere aka n’oge Euro nke mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ nwere ọnụ ọgụgụ kachasị enyere aka na otu ọ bụla n’oge Euro 2020.
Ọ bụ onye na-eme egwuregwu na aka ekpe ma nwee ikike ịgafe site na mbara.
Sebastian Freuler bụ onye ọkpụkpọ na-elezi anya, karịsịa ma ọ bụrụ na egwuregwu ahụ abanye n’ime oge n’ihi ike ya dị ịtụnanya. Freuler nọ n’ọkwa nke anọ n’ihe metụtara tere aka n’oge Euro 2020 ruo ugbu a.
N’ihe banyere agbachitere, Manuel Akanji dị mma na mmeri bọọlụ na ichebe onye na-eche ya. Akanji nwere ọnụ ọgụgụ kacha elu nke atọ nke mgbapụta bọọlụ na Euro 2020.
Switzerland Amụma Line maka Switzerland vs Spain
Anyị na-atụ anya na akara Switzerland agaghị agbanwe agbanwe maka egwuregwu Switzerland na Spain na nkeji iri na anọ na Euro 2020.
Formdị Spain, usoro nwere ike na Usoro
Banye na Euro 2020 Spain nọ na-enwe nnukwu ụdị ụdị. Ha ruru eru maka asọmpi egwuregwu nke mba dị iche iche nke oge a na-atụle ihe mgbaru ọsọ 13 ma na -enye naanị ihe mgbaru ọsọ 3. N’oge asọmpi nke mba dị iche iche, naanị Belgium meriri goolu karịa Spain na sọọsọ Italytali nyere goolu pere mpe karịa Spain.
Spain efunahụkwa naanị otu egwuregwu iri na atọ ha rutere tupu Euro 2020. Agbanyeghị, n’oge a ha gbalịsiri ike iji merie egwuregwu ha n’ihi na ha meriri 6 n’ime egwuregwu ndị ahụ ma dọpụta isii n’ime ha.
Ọdịdị a maka egwuregwu na-ejedebe na nsogbu yiri ka ọ ga-aga n’ihu na egwuregwu 2 mbụ nke Spain n’oge otu egwuregwu megide Sweden na Poland nke mechara 0-0 na 1-1 n’otu n’otu.
Spain na-agba mbọ imebi akụkụ abụọ a ma ha enweghị ụlọ ọgwụ na-ejedebe ihu na ohere ole na ole ha kere.
Mana La Roja bidoro rụọ ọrụ n’egwuregwu nke ikpeazụ ha gbasara ọkpụ goolu ise nke mere ka ha nwee ntụpọ n’agba iri na isii dịka ndị ọgba ọsọ nke otu E.
Spain pụta mmeri na nnukwu egwuregwu na egwuregwu dị nso na agba nke iri na isii ha na Croatia, egwuregwu nke mechara 5-3 na oge oge.
Ma mgbe ha nwesịrị ihe ngosi megide Croatia, Spain ugbu a enweela ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ihe mgbaru ọsọ ma nwee nke abụọ kachasị elu na mgbaru ọsọ nke kụrụ ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Ọ bụrụ na e nwere otu mkpụrụ okwu iji kọwaa ụzọ aghụghọ Spain okwu ahụ ga-abụ “mmiri mmiri”. Spain juputara na ikike n’ofe ubi ma o siri ike ka ndi otu kwue uzo otu a ga-esi ugwo. Anyị ga-anwa ike anyị niile iji chịkọta ụzọ aghụghọ Spain n’oge European Championship.
Spain na-etinyekarị na nhazi 4-3-3 Ma ha abụọ ma ọ bụ ndị na-aga n’ihu ga-achọ ịnọ na mbara Ma ọ bụ na ndị nkwado niile ga-esonye na mwakpo ahụ site na mbara ma ọ bụ otu n’ime ha adaba azụ ka ọ bụrụ azụ. inweta ụdị nke football na-ekwusi ike na directnessThe na-aga n’ihu bụ ihe nke “ụgha 9”. Ndị egwuregwu na-eme mgbanwe nke ọma n’ihe banyere ha na-eme na pitch
Ka anyị buru ụzọ kwuo maka otu Spain si amasị izizi ya. Dị ka anyị kwuru na mbụ, Spain nwere mmasị ịtọlite ​​na 4-3-3.
Ndị na-etiti etiti atọ ahụ nwere nnukwu ọrụ ha. Na-enwe onye na-agbachitere / na-ejide onye na-eme egwuregwu dịka Busquets ma ọ bụ Thiago bụ onye nwere ike ichebe nchebe site na mwakpo ọgụ, weghachite bọọlụ, nwee ọganihu bọọlụ site na azụ yana ịmepụta bọọlụ dị ogologo maka ndị na-aga n’ihu.
Ndị ọzọ na etiti abụọ ahụ nwere nnukwu mmiri, ha nwere ike ịkwalite ma sonye na mwakpo ahụ, gbasaa ma ọ bụ otu n’ime ha nwere ike mepụta pọọpụ abụọ na etiti na-ejide ya.
Nke a na – eme ka o siere ndị mmegide ike ịma ihe Spain ga – eme.
Aka nri na azụ laghachi na mbara ma na-akpachara anya. Agbanyeghị, mgbe ị na-ewulite mwakpo, otu n’ime ha na-agbatịkwu ntakịrị iji mepụta ohere maka ịgafe. Nke a na-abụkarị azụ ekpe.
N’adịghị ka ọtụtụ otu anyị kpuchiri n’oge Euro 2020, ndị na-aga n’ihu na Spain na-anọkarị. Mana dịka ndị otu ha gafere n’ọhịa ahụ, otu n’ime ha nwere ike belata n’ime, ebe onye nke ọzọ na-anọ obosara. Nke a mepụtara ohere maka otu onye nkwado zuru ezu ịga n’ihu na iti na obe.
Ọ bụrụ na ndị mwakpo ahụ gbasaa, mmadụ abụọ n’ime ndị egwuregwu bọọlụ 3 na-agbago ebe ndị na-akwado ya na-anọ ntakịrị azụ iji nye nchebe siri ike.
Usoro nke Spain siri ike ikpuchi kpọmkwem n’ihi nke a, ha nwere ike gbasaa n’ụzọ dị mfe na mwakpo na-enweghị ike ịlaghachi na kọmpat na nchekwa.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke aghụghọ nke Spain bụ ikike ha nwere ịsọ mpi maka bọọlụ ozugbo ha tufuru ya.
Spain Mara amụma akara
Anyị na-atụ anya ka usoro Spain ghara ịgbanwe agbanwe. Ọ bụ ezie na njehie Unai Simon merụrụ Spain goolu, ọ rụrụ nke ọma ka egwuregwu ahụ gara n’ihu. Anyị kpebiri itinye na De Gea n’ọnọdụ Unai Simon n’ihe mgbaru ọsọ mana atụla gị n’anya ma ọ bụrụ na Unai Simon ka malitere n’ihi na ọ bidola egwuregwu ọ bụla na Euro 2020 kama De Gea.
Switzerland vs Spain Euro 2020 Amụma
Euro 2020 juputara na ihe ịtụnanya ebe ndị otu “ike ọgwụgwụ” meriri otu “siri ike” otu. Czech Republic nke mechara nke atọ n’otu ha, meriri Netherlands nke meriri egwuregwu ọ bụla ma toro otu ha.
Switzerland onwe ya, meriri ọkacha mmasị France. Yabụ mgbe ị gụrụ amụma ndị a ị kwesịrị iche na egwuregwu ndị a nwere ike ịga otu ụzọ ọ bụla.
Ikwu nke a bụ ihe anyị tụrụ anya n’oge egwuregwu Switzerland na Spain na nkeji iri na anọ nke Euro 2020:
Switzerland ga-agba mbọ iwulite ọgụ jiri ndidi wee kụrụ Spain na tebulu. Ha ga-eme ike ha niile ịgọnahụ ohere ọ bụla Spen.
Anyị na-atụ anya na Switzerland ga-alụso ọgụ ọgụ site n’aka ekpe ya na Zuber na-akwa elu. Spain ga-atụ anya nke a ma gbalịa ịmepụta oke ibu na aka ekpe ma gbanwee ngwa ngwa bọọlụ gaa n’aka nri nke mere na Ferran Torres nwere ohere ịwakpo n’aka nri ma jiri ohere ahụ Zuber hapụrụ.
Ọ bụrụ na Zuber dị mma na nsuso azụ, Spain ga-anwa igbochi Switzerland na mmiri ya ma gbaa mbọ ijide bọọlụ.
Y’oburu na Switzerland enye goolu, o ga adiri anyi nma. Ọ gaghị eju anyị anya ma ọ bụrụ na egwuregwu a bụ egwuregwu asọmpi nwere ike kpebie na oge ọzọ.
Anyị na-eche na Switzerland nwere ike karịa akara yabụ amụma anyị maka egwuregwu Switzerland na Spain bụ na Spain ga-emeri n’oge oge na akara ngosi ga-abụ 3-2.
Switzerland na Spain Euro 2020 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị a maka egwuregwu Switzerland na Spain na Euro 2020:
Switzerland 5.20 Dọrọ 3.70Spain 1.73
Site na nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na Spain bụ ọkacha mmasị iji merie egwuregwu a.
Bookmaker na-enye Switzerland Switzerland na Spain na Euro 2020
Switzerland na Spain Atụmatụ ịkụ nzọ
Dịka anyị kwuru na mbụ na ngalaba amụma Spain na Switzerland nke isiokwu a, anyị na-ebu amụma na Spain ga-emeri 3-1. N’ihi oke nsogbu maka Spain, anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị nọrọ na Spen n’ihi na ị gaghị enweta nnukwu uru site na ịkụ nzọ dị mfe.
N’ikwu ya dị ka nkwarụ nkwarụ, oke / n’okpuru ịkụ nzọ nhọrọ nwere ike bụrụ uru bara uru ọ bụghị naanị maka egwuregwu Euro 2020 a n’etiti Spain na Switzerland kamakwa ọtụtụ egwuregwu bọọlụ n’oge Euro na ọkacha mmasị na okpuru.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ịkụ nzọ anyị nwere maka gị na Spain na Switzerland egwuregwu na Euro 2020:
N’ime ihe mgbaru ọsọ 4.5 ka a gbata n’oge egwuregwu ahụ. Nsogbu 6.60 Handicap ịkụ nzọ, Spain bidoro site na 0 goolu, Switzerland na 1, egwuregwu jedebere na ndọta. Nsogbu 3.60Spain meriri egwuregwu ahụ site na oke ihe mgbaru ọsọ 1. Nsogbu Haris Seferovic, Spain meriri. Nsogbu 12.00
Ọ bụrụ na ị masịrị amụma anyị maka egwuregwu nke Switzerland na Spain na asọmpi nkeji asatọ na Euro 2020, lelee nyocha ndị ọzọ maka nkeji iri na ise:
Ndị na-eme egwuregwu na-eme ihe na ndị na-ekwesịghị ịma kwesịrị ịma mgbe ha na-egwu egwuregwu egwuregwu bọọlụ n’ịntanetị – Blog Online